Shotcrete spraying motokari QSP30A - China Qingdao CO-NELE Group
Max yokungotaura goho: 25m3 / h 30m3 / h
Cylinder dia of. × Kurohwa: Φ160 * 1000mm
Spraying kukwirira: 16m
Spraying upamhi: 26.8m
chokurukisa axial kutenderera angled: 360 °
2.The tiguu adopts symmetrically akaronga chivako.
3.The tiguu anogona uku ± 45 °, unogona kuwedzera felxibility ari ndege mashandiro kuvandudza spraying nzvimbo.
4.Rotary yokuderedza MAD Turbo-mhando giya rutapudzo mashandiro, hombe rutapudzo reshiyo, simba kuzvipira nokukiya mano, guru goho torque, kugadzikana wakatsetseka operation.high rakavimbika
mhando chikwata KNL5160TPJ-30a parameter
The muchina yose dhayamita Boom mamiriro Big uye diki ruoko akaukanda uye ruoko duku kutambanuka
Spraying kukwirira M 16
Spraying upamhi M 26.8
Big ruoko yokukandwa angled 0-60 °
Small ruoko yokukandwa angled + 15 ° -35 °
Boom kutenderera angled + 300 °
Flying ruoko chinjikira famba angled + 45 °
Chokurukisa axial kutenderera angled 360 °
Chokurukisa mira axial famba angled 240 °
Kamwene Swing angled + 4 °
Front gumbo span mm 2.3 ~ 3.7
Rear gumbo span mm 2.6
System parameter Front uye shure gumbo span mm 5100
Main ngarurege muoti motokari
Auxiliary ngarurege muoti Diesel injini
Motor yavose sezvavakatarirwa simba KW 55
Concrete spraying chinzvimbo M3 / h 30
kupomba kumanikidzwa Mpa 10
Concrete humburumbira dhayamita * sitiroko mm Φ160 * 1200
Oil humburumbira dia of. * Rutanda dia of. * Sitiroko mm Φ100 * Φ80 * 1200
Output dhayamita mm Φ125
Delivery mutopota dhayamita mm Φ80
kamwene dhayamita mm Φ50
Air compressor parameters (optional) 12m3 / Maminitsi, 0.8Mpa
Chassis parameter mhando CDW1160HA1R5
Wheel garo mm 5000
Engine womuenzaniso YC4EG185-50
Engine simba KW 136 (186hp)
Gearbox faira 8 rachulis (mukuru uye pasi nokukurumidza)
Maximum nokukurumidza Km / h 80
Grade kugona 30%
Fuel tangi vhoriyamu L 200
Pedza achine mitemo Nation V
The yose divi mm 9200x2460x3670
A. Front uye neshure gumbo racho hupfupi ari guru, kushanda takatsiga.
1.The gumbo kumberi
Adopts chinjikira telescopic humburumbira + H-mhando makumbo, makumbo hupfupi guru, maererano yokuvakira, ukuwo, kudzora Kureba gumbo anogona zvinobudirira kuwedzera kugadzikana uye kuchengeteka midziyo.
2.The rwemberi gumbo
Adopts sere vatambi akavhara mhando gumbo, kumanikidza kugona zvakanaka, zvakawanda kutsiga, anogona zvinobudirira kutsigira rwemberi Hopper kupomba kongiri humburumbira vachizvitakudza rova.
B. kupomba maitiro
1.pumping maitiro achishandisa φ160 kongiri humburumbira, 1.2m sitiroko, chikuru humburumbira humburumbira dhayamita φ100. (30 trolley)
2. kupomba hydraulic hurongwa uchishandisa 55KW mana danda injini 130ml / R chinjika misha huru pombi + 45ml / R
Shanduka Pombi (Rexroth series)
3.The huru vharafu adopts masere-mutsetse Proportional vharafu (BARMAG), iro rine shanduka shanduka nokuchinja chaitika. Kana nokuchinja kune shanduka rudzi, yemagetsi Proportional vharuvhu anogona Takudzai-vasanonoka ari shanduka pombi maererano kuitika chiito uye mutoro, kutungamirira shanduka pombi goho shanduka, saka kuti vabudirire chinangwa simba kunyatsoshanda.
1. Kurohwa refu, shoma nguva commutation, duku nezvifambiso kwechirwere, zvishoma volatility, kuti ndege pamusoro chakachena, mvere, nyore kudzora.
2.130ml / R chinjika misha huru pombi, pasi simba rakawanda, mukuru kuvimbika, upenyu hurefu, pokugara misha.
3.45ml / R shanduka pombi, maererano chiito nokukurumidza uye amplitude pamusoro kukura goho misha, kuderedza simba rakawanda, chiito Kufambisa uye isimbe.
4.less nokuchinja nguva, kuti magirazi ndiro, achicheka loop kuchinja kutenderera refu nguva. Export kumanikidzwa, chokufambisa zvinhu kugona yakasimba, regai kutanha zvinhu, ichivharira ngozi ipfupi kwazvo.
C. The tiguu adopts symmetrically akaronga mamiriro
Advantages: The tiguu iri symmetrically varonga zvakafanana, ichibata marongerwo. The telescopic ruoko zvakabatana muzasi ruoko pamusoro chete akabatana. The telescopic ruoko chokuita muzasi ruoko kuburikidza mbambo. No unobatanidza ruoko, hapana lateral simba, hapana kunetseka wevasungwa, hapana kuitika Kuneta cracking walnut, saka tiguu hurongwa akatsiga zvikuru uye hwakavimbika.
ari kuwedzera uku pemapapiro kubudikidza famba injini unobva, ipapo ngadzibhururuke ruoko kubatanidza jetting mashandiro, unogona kusununguka ± 45 °.
Advantages: Swing ruoko famba angled ane simba guru, kudzikama, unogona kuwedzera mukana wokushandiswa ari ndege mashandiro kuvandudza chete sprayable nzvimbo, kwete chete pfapfaidzo pamusoro zvikuru mvere, akanaka, asi kuderedza turntable kutenderera nguva, kuwedzera kugadzikana ari kuwedzera
Telescopic ruoko nemana BS700 mukuru-simba simbi yairema welded pashure nomoto, weld majoini vane pamakumbo bhaa, ruoko kunopindirana kuomarara kuwedzera
Advantages: kumusoro-simba simbi yacho tiguu kuita telescopic ruoko iri nyoro pfapfaidzo mashandiro ehurumende, kuti jitter amplitude iri diki, kutsiga zvakanaka, anogona kuvandudza of pfapfaidzo pamusoro
F. yanyatsosimba muhombe ngarurege mashandiro
1.rotary yokuderedza adopts Turbo-mhando giya rutapudzo mashandiro, hombe rutapudzo reshiyo, simba kuzvipira nokukiya mano, guru goho torque, kugadzikana ishande, mukuru kuvimbika.
2.rotary mhete giya riri guru, chinotenderera dhayamita ndiyo 760mm, zino pemvura pashure richipedza, Chrome nezvimwe post-kubudiswa michina, matunhu simba, Haakurumidzi zino chinonakidza.
3.Adopts inozivikanwa muchiso muhombe injini, hombe misha, torque, zvakanaka pakusimba, mune chairo kudzora Proportional vharuvhu, vachishandisa kutenderera pasina jitter chinonakidza.
G.Electrical kudzora maitiro
1.Contactor pamwe Schneider (Schneider)
2.DC simba zvitengeswa uchishandisa Siemens (Siemens)
3.The Frequency controller anoshandisa Schneider (Schneider)
4.PLC controller uchishandisa Siemens (Siemens)
5.Relay ufambe pamwe Siemens (Siemens)
6.Remote kuzvidzora adopts mudzimba kuzivikanwa mavanga, kure kudzora kure, simba chiratidzo, hapana akadonha panodana, Serial nhamba chaiyo.
H.Quick - kuisa mumiririri zvekupfakira hurongwa
1. akisarareta pombi rinosundwa shanduka kakawanda injini, kushandiswa Schneider inverter zvakarurama kudzora anokurumidza kuronga mumiririri pombi goho aibuda, maererano mamiriro kupomba uwandu kongiri vapiwa chinja uwandu yakawedzerwa.
2.Accelerator pombi pamwe 2600L / h guru misha diaphragm pombi, unogona kuwedzera 1000 L bhokisi mumaminitsi 20, achiponesa zvikuru kugadzirira nguva.
3. akisarareta pombi pamwe 760L / 2.6Mpa shanduka pisitoni pombi, kwete nyore kukuvadzwa, uyewo hunogara chaizvo, kuti kuchinja nguva yokuti nokukurumidza kusakara zvikamu kwenguva, zvishoma dambudziko pfungwa.
4.Accelerator Mapaipi adopts munhu namahwindo guru dhayamita mutopota, kunyange munguva yechando kunogonawo mvere Delivery akisarareta.
Previous: Mine Shotcret mwaya pombi muchina HSPJ12
Concrete chisanganiso pombi Diesel JBT40-11-56
CONELE kongiri pombi rori